कन्साइ एयरपोर्ट (KIX)! कसरी ओसाका, क्योटो / अन्वेषण टर्मिनल १, २ सम्म पुग्ने - Best of Japan
ओसाका मा Kansai एयरपोर्ट, जापान = शटरस्टक
जब तपाईं जापान जानुहुन्छ तपाईंसँग ओसाकामा एयरपोर्ट टोकियोको एयरपोर्टको अलावा प्रयोग गर्ने विकल्प हुन्छ। ओसाकासँग "कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट" छ जुन २ hours घण्टा अपरेट गर्दछ। यस पृष्ठमा, म यस एयरपोर्टको रूपरेखा र यस एयरपोर्टबाट क्योटो, ओसाका आदिको बारेमा कसरी जान्ने भनेर परिचय दिनेछु।
कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट (KIX) को रूपरेखा
कन्साइ एयरपोर्टमा JR Rail Pass कसरी सक्रिय गर्ने
ओसाका, क्योटो, आदिमा कन्साइ एयरपोर्ट।
कन्साई ईन्टरनल एयरपोर्ट वा KIX जापानको दोस्रो ठूलो एयरपोर्ट हो, ओसाका शहर नजिकै अवस्थित = शटरस्टक
Kansai एयरपोर्ट आधिकारिक वेबसाइट एक अलग पृष्ठमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जापानको अग्रणी विमानस्थलहरू मध्ये एक हो जुन कृत्रिम टापुमा अवस्थित छ, ओसाका प्रान्तको दक्षिणी भागमा km किलोमिटर अपतटीय। यो अर्को साइडमा 5..3.75 किलोमिटर लम्बाइको पूलबाट जोडिएको छ। सडकहरू र रेलमार्गहरू यस पुलबाट भएर सर्छन्। यो ओसाका स्टेशनबाट लगभग kilometers० किलोमिटर टाढा छ। कन्साइ एयरपोर्ट र ओसाका शहर बीच, JR र Nankai ट्रेन संचालित छन्।
कन्साइ एयरपोर्टमा त्यहाँ दुईवटा टर्मिनल भवनहरू छन्। टर्मिनल १ बाट तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू र नियमित एयरलाइन्सको घरेलू उडानहरूमा बोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। टर्मिनल २ बाट तपाईं LCC अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू र घरेलू उडानहरू बोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि केहि LCC हरू टर्मिनल १ बाट आउँछन् र प्रस्थान गर्छन्।
टर्मिनल २ टर्मिनल १ भन्दा धेरै असुविधाजनक छ, त्यसैले यदि तपाईं LCC प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि LCC छान्नुहोस् जुन टर्मिनल १ बाट छोड्दछ।
कन्साइ एयरपोर्ट वा इटामी एयरपोर्ट?
ओसाकामा कन्साइ एयरपोर्ट र इटामी एयरपोर्ट छन्। यी मध्ये कुन राम्रो प्रयोग गर्नु पर्छ?
कन्साइ एयरपोर्ट> इटामी एयरपोर्ट
यदि तपाईं निम्नको रूपमा यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया कन्साइ एयरपोर्ट प्रयोग गर्नुहोस्।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रयोग गर्नुहोस् ...
इटामी एयरपोर्टमा, मूल रूपमा केवल घरेलु उडानहरू संचालित हुन्छन्।
LCC प्रयोग गर्नुहोस् ...
LCC केवल कन्साई एयरपोर्टमा संचालित छ।
कन्साई क्षेत्रको दक्षिणी भागमा यात्रा गर्नुहोस् ...
ओसाकाको उत्तरी भागमा अवस्थित इटामी एयरपोर्टबाट ओसाकाको दक्षिणतिर जान समय लाग्छ। ओसाकाको दक्षिणमा कन्साइ एयरपोर्ट प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। ओन्साका दक्षिणी भागमा नम्बा र डोटनबोरीमा जाँदा कन्साइ एयरपोर्टबाट नन्काई एक्सप्रेस लिन छिटो हुन्छ।
यदि तपाईं निम्न यात्राहरू विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं Itami एयरपोर्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
ओसाकाको उत्तरी भाग र कन्साई क्षेत्रको उत्तरी भाग ...
इटामी एयरपोर्ट यी क्षेत्रमा जान बढी सुविधाजनक छ।
यूनिवर्सल स्टुडियो जापान (USJ) मा जानुहोस् ...
यो ami० मिनेटको बस सवारी हो जुन इटामी एयरपोर्टबाट युएसजे सम्म जान्छ। अर्कोतर्फ, यो कन्साइ एयरपोर्टबाट १ घण्टा २० मिनेट बसमा लिन्छ।
टर्मिनल १ कन्साई एयरपोर्टको मुख्य टर्मिनल हो। LCC बाहेकको हवाईजहाज दुबै अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु उडानहरूका लागि टर्मिनल १ प्रयोग गर्दछ। टर्मिनल १ उत्तरी विing र दक्षिण विing्गको साथ चार-मंजिला भवन हो। टर्मिनल १ JR र Nankai ट्रेन को Kansai एयरपोर्ट स्टेशन, र Aero प्लाजा जो होटल आदि छन् पैदल डेक संग जोडिएको छ। एरो प्लाजाको पहिलो फ्लोरमा टर्मिनल २ सम्म टर्मिनल १ र टर्मिनल २ को लागी निःशुल्क बस बस स्टेशन छ। 1 किलोमिटर टाढा छ।
1F अन्तर्राष्ट्रिय आगमन लबी
त्यहाँ एक अन्तर्राष्ट्रिय आगमन लबी छ। जब तपाईं जापानमा पुग्नुहुनेछ, तपाईं यस तल्लामा आउनुहुनेछ। त्यहाँ बाहिर एक बस स्टप र ट्याक्सी स्ट्यान्ड छ। यदि तपाईं ट्रेन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने माथि जानुहोस्।
२ एफ घरेलु आगमन / प्रस्थान गेट
त्यहाँ आन्तरिक आगमन गेटहरू र प्रस्थान गेटहरू छन्। रेस्टुरेन्टहरू, बैंकहरू, क्लिनिकहरू र यस्तै। बाहिर त्यहाँ पैदल यात्री डेकहरू छन् जुन कन्साइ एयरपोर्ट स्टेशन (JR, Nankai) र Aero प्लाजामा जान्छन्। यदि तपाईं टर्मिनल २ मा जानुभयो भने, कृपया एरो प्लाजा १ तलाबाट नि: शुल्क बस लिनुहोस्।
त्यहाँ २ 24 घण्टा लाउन्ज "KIX एयरपोर्ट लाउन्ज" पनि छ जुन कोहीले पनि प्रयोग गर्न सक्दछ। यहाँ सम्म कि एक स्नान (अतिरिक्त चार्ज) यहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं कन्साइ एयरपोर्टमा लामो समय खर्च गर्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु यो लाउन्ज प्रयोग गर्नुहोस्।
3F स्टोर र रेष्टुरेन्टहरू
तेस्रो तलामा धेरै पसल र रेष्टुरेन्टहरू छन्।
चौथो फ्लोर प्रस्थान लॉबी
जब तपाईं आफ्नो घर फर्कनुहुन्छ, कृपया चौथो तलामा जाँच गर्नुहोस् र प्रस्थान गेट प्रविष्ट गर्नुहोस्। चौथो तला बाहिर बाहिर बस र ट्याक्सी ड्रप अफ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू (उत्तर विंग)
शो: उडानहरूको सूची हेर्न कृपया यो बटन क्लिक गर्नुहोस्
सबै निप्पन एयरवेज (एएनए): बेइजि / / क्यापिटल, डालियान, किing्गदाओ, ह Hang्जाउ, शंघाई / पुडोंग
भेनिला एयर: ताइपे / ताओयुआन
कोरियाली एयर: सियोल / इनचान, सियोल / गिम्पो, बुसान, जेजु
एशियाना एयरलाइन्स: सियोल / इनचान, सियोल / गिम्पो
एयर बुसान: बुसान, डेगु
एयर सियोल: Seoul / Incheon
सँधै उड्डयन: ताइपे / ताओयुवान, काओसुsi
शेन्डोंग उड्डयन: जिनान, किing्गदाओ, उरुमकी (किंगदाओ मार्फत), कुनमिंग
टियानजिन एयरलाइन्स: टियानजिन, जियान
भाग्यशाली एयर: ज़ुझाउ
क्याथे प्रशान्त एयरवेज: ह Hongक Kong, ताइपे / तायोयु
ह Hongक Kong उड्डयन: हङकङ
ह Hongक Kong एक्सप्रेस: हङकङ
मलेशिया एयरलाइन्स: कुवलालम्पुर
एयरएशिया एक्स: क्वालालम्पुर, होनोलुलु, ताइपे / ताओयुआन
थाई अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स: बैंकक / सुवर्णभूमि
थाईल्याण्ड · एयर एशिया एक्स: बैंकक / डॉन मुआang
स्कक नक: बैंकक / डॉन मुआang
जेस्टार प्रशान्त एयरवेज: हनोई
Bettjet एयर: हनोई शहर, हो ची मिन्ह शहर
जेस्टार एशिया एयरलाइन्स: सिंगापुर (ताइपे / ताओयुआन, मनिला, क्लार्क मार्फत), ताइपे / ताओयुआन, मनिला, क्लार्क
एयर इंडिया: दिल्ली (ह Hongक Kong मार्फत), मुम्बई (ह Hongक Kong, दिल्ली), ह Hongक Kong
डेल्टा एयर लाइन्स: होनोलुलु
संयुक्त एयरलाइन्स: सान फ्रान्सिस्को, गुआम
हवाई एयरलाइन्स: होनोलुलु
एयर क्यानाडा रुज: भ्याकूवर (मौसमी उडान)
Lufthansa जर्मन एयरलाइन्स: फ्रैंकफर्ट
S7 उड्डयन: भ्लादिवोस्तोक (मौसमी उडान)
न्यूजील्याण्ड एयरलाइन्स: अकल्याण्ड (मौसमी संचालित)
अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू (दक्षिण विंग)
जापान एयरलाइन्स (JAL): ताइपे / ताओयुआन, शंघाई / पुडोंग, बैंकक / सुवर्णभूमि, लस एन्जलस, होनोलुलु
जेस्टार जापान: ताइपे / ताओयुआन, ह Hongक Kong, मनिला
इस्टर एयरवेज: सियोल / इनचान, बुसान, चेओन्जु
जिन एयर: सियोल / इनचान, बुसान
चिया वे एयरलाइन्स: सियोल / इनचान, बुसान, डेगु, जेजु, गुआम
चीन एयरलाइन: ताइपे / ताओयुआन, काउसिung, ताईनान
टाइगर एयर ताइवान: ताइपे / ताओयुवान, काओसुsi
चीन अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स: बेइजि / / राजधानी, शंघाई / पुडोंग, टियानजिन (डालियान मार्फत), डालियान, चे ,्दू
चीन पूर्वी एयरलाइन्स: बेइजि / / क्यापिटल, शंघाई / पुडोंग, नानजिंग, यान्ताई, किing्गदाओ, कुन्मिming (शंघाई वा चाgs्शा हुँदै), सियान (किda्गदाओ मार्फत), चेdu्गदु (नानजिing हुँदै), निbo्गो, चांगशा, यान्जी, डालियान
चीन दक्षिणी एयरलाइन्स: शंघाई / पुडong्ग, डालियान, गुआangझाउ, शेन्याy, हार्बिन, गुइयांग, झेंग्झौ, चांग्शा, सान्या (गुआन्झाउ हुँदै), शेन्जेन, वुहान
शंघाई एयरलाइन्स: शंघाई / पुडोंग, झेंग्झौ (शंघाई मार्फत)
जुन्यायो एयरलाइन्स: शंघाई / पुडोंग, यिनचुआन (शंघाई मार्फत), नानजिंग
शेन्जेन एयरलाइन्स: बेइजि / / राजधानी शहर, वूशी, शेन्जेन, नान्टाong्ग
ज़ियामेन एयर: ज़ियामेन, फुजो, ह Hang्जो
बेइजि Cap राजधानी एयरलाइन्स: हांग्जो
सिचुआन एयरलाइन्स: चेng्गदु, जियान
मकाउ एयरलाइन्स: मकाउ
फिलिपिन्स एयरलाइन्स: मनिला, सेबु, ताइपे / तायोयु
सेबु प्रशान्त एयरवेज: मनिला
गरुड़ इन्डोनेशिया एयरलाइन्स: जकार्ता, डेन्पासार
भियतनाम एयरलाइन्स: हनोई, हो ची मिन्ह सिटी, दा नांग
स्कूट: सिंगापुर, बैंकक / डॉन मुआang, काउसिung, होनोलुलु
इमिरेट्स एयरलाइन्स: दुबई
एयर फ्रान्स: पेरिस / चार्ल्स डे गउले
KLM नेदरल्याण्ड एयरलाइन्स: एम्स्टर्डम
जेस्टार एयरवेज: केर्न
एयर क्यालेडोनिया अन्तर्राष्ट्रिय: नौमेआ
जापान एयरलाइन्स (JAL): सप्पोरो / न्यू चिटोज, टोकियो / हनेडा
जापान ट्रान्स ओशन एयरवेज: ओकिनावा / नाहा, ईशिगाकी
जेस्टार जापान: सप्पोरो / शिन चिटोज, टोकियो / नरिता, कोच्चि, फुकुओका, कुमामोटो, ओकिनावा / नाहा
सबै निप्पन एयरवेज (एएनए): मेमानबेत्सु (ग्रीष्म seasonतु), सप्पोरो / न्यू चिटोज, टोकियो / हनेडा, फुकुओका, ओकिनावा / नाहा, मियाको, ईशिगाकी
स्टारफ्लायर: टोकियो / हनेडा
भेनिला एयर: अमामी
कन्साइ एयरपोर्टको टर्मिनल २ एक साधारण भवन हो जुन LCC, ओसाका, जापानलाई समर्पित छ
टर्मिनल २ LCC को लागी हो। यो टर्मिनल १ को छेउमा एरो प्लाजाको पहिलो तल्लाबाट लगभग १० मिनेट निःशुल्क बसद्वारा अवस्थित छ। बस २ The घण्टा सञ्चालन हुन्छ। कृपया सावधान हुनुहोस् किनकि यो धेरै टाढा छ। टर्मिनल २ सँग रेल स्टेशन छैन। यदि तपाईं ट्रेन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, कृपया नि: शुल्क बस द्वारा एरोप्लाजामा जानुहोस् र जेआर वा नन्काई कन्साइ एयरपोर्ट स्टेशन प्रयोग गर्नुहोस्।
टर्मिनल २ एक धेरै साधारण एक मंजिला भवन हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको लागि एक अन्तरिक्ष र घरेलू उडानहरूको लागि एक स्पेसमा विभाजित छ। भवन भित्र भित्र सुविधा स्टोरहरू, रेष्टुरेन्टहरू, क्याफेहरू, विदेशी मुद्रा एक्सचेन्ज कार्यालयहरू, एटीएम, पर्यटक सूचना केन्द्र, इत्यादि छन्। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको प्रस्थान गेट क्षेत्रमा शुल्क मुक्त पसलहरू पनि छन्।
पीच उड्डयन: सियोल / ईन्चियोन, बुसान, ताइपे / ताओयुआन, काओसुung, शंघाई / पुडोंग, ह Hongक Kong
चेजु एयरवेज: सियोल / इनचान, सियोल / जिम्पो, बुसान, चेओन्जुजू, मुआन, गुआम
वसन्त शरद उड्डयन: शंघाई / पुडोंग, डालियान, वुहान, चोंगकिंग, टियानजिन, जियान, याzhou्झउ
पीच उड्डयन: सप्पोरो / न्यू चिटोज, कुशिरो, सेन्दै, टोकियो / नरिता, निगाता, मत्सुयामा, फुकुओका, नागासाकी, मियाजाकी, कागोशिमा, ओकिनावा / नाहा, इशिगाकी
टर्मिनल १ सँगैको एरो प्लाजामा होटल निक्को कन्साइ एयरपोर्ट र रेस्टुरेन्टहरू, कन्साइ एयरपोर्ट, ओसाका, जापान = शटरस्टक
एरो प्लाजा टर्मिनल १ र कन्साई एयरपोर्ट स्टेशन (JR, Nankai) पछि अर्को ठूलो भवन हो। यो कार्यात्मक रूपमा टर्मिनल १ पूरक गर्दछ। एरो प्लाजामा, पसल र रेष्टुरेन्टहरू बाहेक निम्न सुविधाहरू सामेल छन्।
टर्मिनल २ मा निःशुल्क बस स्टपहरू
टर्मिनल २ मा जानको लागि बस २2घण्टा सञ्चालन हुन्छ। अर्को शब्दहरु मा, टर्मिनल १ र टर्मिनल २ को बिच कुनै नि: शुल्क प्रत्यक्ष बस छैन। कृपया याद गर्नुहोस् कि नि: शुल्क बस यहाँबाट छुट्छ।
होटल निक्को कन्साइ एयरपोर्ट
होटल निक्को कन्साइ एयरपोर्ट एक लग्जरी होटेल हो जुन एरो प्लाजाको अधिकांश हिस्सा ओगट्छ। ग्रेड लगभग stars तारे छ। दोस्रो तलामा प्रवेश द्वार छ।
यो होटेल कन्साइ एयरपोर्टको सब भन्दा राम्रो ठाउँमा अवस्थित छ। तपाईं धेरै आराम संग खर्च गर्न मा सक्षम हुनेछ। जे होस्, जब म वास्तवमै बस्छु, मलाई लाग्छ कि मूल्य उच्च छ र लागत प्रदर्शन राम्रो छैन।
यो होटल सब भन्दा सुविधाजनक छ यदि तपाईं बिहान सबेरै उडान प्रयोग गर्नुहुन्छ। जहाँसम्म, यदि होईन भने, म नाम्बा वा उम्मेदमा होटलहरूमा बस्न सिफारिस गर्दछु।
>> होटल निक्को कन्साइ एयरपोर्टको आधिकारिक वेबसाइटको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
पहिलो केबिन कन्साइ एयरपोर्ट
पहिलो केबिन कन्साइ एयरपोर्ट एरो प्लाजाको तेस्रो तल्लामा सानो क्याप्सुल प्रकारको होटेल हो। किनकि यो क्याप्सुल होटेल हो, कानुन द्वारा कोठामा कुनै कुञ्जी छैन। कोठाहरू पुरुष र महिला बीच विभाजित छन्। त्यहाँ सार्वजनिक स्नान र लाउन्ज पनि छ। चेक-इन समय १ o'clock बजे देखि हो, र आवास शुल्क person,२०० येन (कर सहित) प्रति व्यक्ति हो। दिनको समयमा छोटो रहन पनि सम्भव छ।
>> पहिलो केबिन कन्साइ एयरपोर्ट आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
त्यहाँ JR को कान्साइ एयरपोर्ट स्टेशनमा "JR टिकट कार्यालय (Midori कुनै माडोगुची) छैन"। तपाईं आफ्नो जापान रेल पास पाउन सक्नुहुनेछ = शटरस्टक
जापानमा, जेआरले विदेशी पर्यटकहरूको लागि "जापान रेल पास" प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं यो पास प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं शिंकान्सेन, जेआर एक्सप्रेस, साधारण कार आदि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं जापान रेल पास प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं कन्साइ एयरपोर्टमा पुगे पछि तपाईंले जापान रेल पासमा अग्रिम किन्नुभएको भाउचर विनिमय गर्नुपर्नेछ।
यदि तपाईं कन्साइ एयरपोर्टमा जापान रेल पास प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने जेआर कान्साइ एयरपोर्ट स्टेशनको टिकट विकि machines मेशिनको पछाडि JR टिकट अफिस (जापानी भाषामा "मिडोरी नो माडोगुची" भनिन्छ) जानुहोस्। यदि तपाईं जेआर टिकट कार्यालयमा जापान रेल पास पाउनुभयो भने, तपाईं पनि कुनै पनी शुल्क बिना JR को तोकिएको टिकट लिन सक्नुहुन्छ।
यद्यपि कन्साइ एयरपोर्ट स्टेशनको टिकट कार्यालय कहिलेकाँही विदेशी पर्यटकहरूको भीडले भरिन्छ। यस्तो अवस्थामा, तपाइँले थोरै कुर्नु पर्छ, वा फरक स्टेशनमा साटासाट गर्नुपर्नेछ।
ओसाका, जापानमा नोभेम्बर २, २०१2मा कन्सई एयरपोर्ट स्टेशन इन्टीरियर। कन्साइ एयरपोर्ट स्टेशन एक रेलवे स्टेशन हो जुन Nankai इलेक्ट्रिक रेलवे र JR पश्चिम द्वारा कन्साई ईन्टरल एयरपोर्ट = शटरस्टकमा साझेदारी गरिएको छ
क्योटो, हिरोशिमा आदि लाई।
कन्साइ एयरपोर्टबाट ओसाका वा क्योटो सम्म तपाईंले रेल वा बस लिनु पर्छ। यदि तपाईं क्योटोमा जानुहुन्छ भने, म जेआर लिमिटेड एक्सप्रेस हारुका सिफारिश गर्दछु। र यदि तपाइँ शिन ओसाका स्टेशन बाट एक Shinkansen लिनुहुन्छ, जेआर लिमिटेड एक्सप्रेस Haruka सिफारिश गरीन्छ।
नाम्बा, डोटनबोरी आदिलाई।
र यदि तपाईं ओसाकाको Namba वरपरको होटेलमा बस्नुहुन्छ भने, म Nanka ट्रेन Namba स्टेशन को सिफारिश गर्दछु।
साधारणतया, बस सिफारिश गरीन्छ
यद्यपि मूलतः यो बस प्रयोग गर्न उत्तम हुन्छ। विशेष गरी यदि तपाईं टर्मिनल २ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाईले बस प्रयोग गर्नु पर्छ किनभने त्यहाँ कुनै स्टेशन छैन।
यदि तपाईं कन्साइ एयरपोर्टबाट नारा स्टेशनमा जानुहुन्छ भने तपाईं नन्काइ ट्रेनबाट नाम्बा जान सक्नुहुन्छ र किन्तेत्सु ट्रेनबाट नारा स्टेशन जान सक्नुहुन्छ। यद्यपि, मलाई लाग्छ कि सिधा बसमा नारा जाने बढी सुविधाजनक छ।
कृपया मलाई JR हेडि forको लागि नीलो र Nankai हेडिंगको लागि रातो प्रयोग गर्न अनुमति दिनुहोस्। कन्साइ एयरपोर्टमा यी दुई रेल स्टेशनहरू एक अर्काको छेउमा छन्। JR को साइनबोर्ड निलो छ! Nankai को चिन्ह रातो छ! कृपया सावधान रहनुहोस् गल्ती नगर्न!
जेआर व्यक्त "हारुका": क्योटो र शिन ओसाकामा दौडँदा सुविधाजनक
JR 281 श्रृंखला सीमित एक्सप्रेस ट्रेन "Haruka" कन्साइ एयरपोर्ट स्टेशनमा। यसले कन्साइ एयरपोर्टलाई क्योटो र ओसाका क्षेत्रहरूसँग जोड्दछ
Haruka सीमित एक्सप्रेस एयरपोर्ट ट्रेन को आन्तरिक = शटरस्टक
JR ले Kansai एयरपोर्ट स्टेशन बाट सीमित एक्सप्रेस "Haruka" संचालित गर्दछ। कन्साइ एयरपोर्टबाट बाहिर निस्केपछि, हारुका टेन्नोजी स्टेशन, शिन - ओसाका स्टेशन, क्योटो स्टेशन, ओत्सु स्टेशन आदिमा जान्छ। यो टेन्नोजीमा 30० मिनेट, शिन-ओसाका स्टेशनमा minutes० मिनेट, क्योटो स्टेशनमा minutes 50 मिनेट छ।
यदि तपाईं ओसाका स्टेशन (उमेदा स्टेशन) मा जानुभयो भने, कृपया टेर्नोजी स्टेशनको जेआर ओसाका-लूप-लाइनमा परिवर्तन गर्नुहोस्। यो लगभग टेनेनोजी स्टेशन देखि ओसाका स्टेशन को लागी २० मिनेट छ।
JR कन्साइ एयरपोर्ट रपिड सेवा प्लेटफर्ममा स्टन्टमा कन्साइ-एयरपोर्ट स्टेशन, ओसाका, जापान = शटरस्टक
यदि तपाईं जेआर ट्रेन द्वारा ट्रेनहरू परिवर्तन बिना नै ओसाका स्टेशन जान चाहानुहुन्छ भने, क्युबाशी स्टेशनको लागि रैपिड ट्रेन प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। यो ट्रेन कन्साइ एयरपोर्टबाट छुट्छ र टेन्नोजी स्टेशन र ओसाका स्टेशनमा रोकिन्छ। यो लगभग १ घण्टा १० मिनेट को कन्साइ एयरपोर्ट स्टेशनबाट ओसाका स्टेशन सम्म छ।
>> विवरणका लागि कृपया JR को आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
Nankai लिमिटेड एक्सप्रेस "र्‍याप: t": सुविधाजनक भने Namba जाँदै
नन्काई लिमिटेड एक्सप्रेस र्याप: टी कन्साइ एयरपोर्टमा, ओसाका, जापान = शटरस्टक
एयरपोर्ट एक्सप्रेस रपीको डिब्बे: ओसाकामा टी, जापान = शटरस्टक
नन्काई ट्रेन दक्षिण ओसाकाको एक प्रमुख निजी रेल हो। सीमित एक्सप्रेस "र्‍याप: t" K 34 मिनेटमा कन्साइ एयरपोर्ट स्टेशन र Namba स्टेशन जोड्दछ। नाम्बा स्टेशन दक्षिणी ओसाकाको केन्द्रीय स्टेशन हो। नाम्बा स्टेशनबाट तपाईं डोटम्बोरी हिंड्न सक्नुहुन्छ जुन ओसाकामा सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटकीय आकर्षण हो।
यस बाहेक, रैपिड ट्रेनले ai 43 मिनेटमा कन्साइ एयरपोर्ट स्टेशन र Namba स्टेशन जोड्दछ। सीमित एक्सप्रेस "र्याप: टी" लाई एक्सप्रेस चार्ज (adult२० येन प्रति वयस्क) को आकार लाग्नेछ, त्यसैले यदि तपाई लागत कम राख्न चाहानुहुन्छ भने रैपिड ट्रेन प्रयोग गर्नु राम्रो विचार हो।
>> विवरणका लागि कृपया ननकाईको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
कन्साई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बस टर्मिनल, ओसाका, जापान = शटरस्टक
कन्साइ एयरपोर्टमा ठूलो संख्यामा बसहरू आउँछन् र प्रस्थान गर्दछन्। यी बसहरू कन्साईका विभिन्न शहरहरूमा जान्छन्। यदि तपाईं बस लिनुभयो भने तपाईं सिधा आफ्नो गन्तव्यमा जान सक्नुहुन्छ।
उदाहरण को लागी, यो १ घण्टा १० मिनेट लिन्छ बसबाट टर्मिनल १ बाट ओर्का ओस्का स्टेशन नजिक हर्बिस ओसाका सम्म। यो लगभग १ घण्टा 1० मिनेट जेआर नारा स्टेशनमा छ।
>> कन्साई एयरपोर्टबाट बसहरूको विवरणहरू यहाँ छन्
बस टर्मिनल २ बाट छुट्छ र टर्मिनल १ हुँदै गन्तव्यमा पुग्छ। यद्यपि केहि बसहरूले टर्मिनल १ बाट टर्मिनल २ बाट नगरी बाहिरिन्छन्।
कन्साइ एयरपोर्टमा, बस प्रत्येक टर्मिनलको पहिलो फ्लोरबाट छुट्छ। त्यहाँ पहिलो तल्ला बाहिर बस टिकट भेन्डि machines मेशिनहरू छन्, त्यसैले टिकट खरीद गरेपछि बोर्डमा जानुहोस्। तलको पृष्ठ प्रत्येक बस स्टप जाँच गर्न उपयोगी छ।
>> कन्साइ एयरपोर्ट बस स्टपको विवरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
दुर्भाग्यवस धेरै व्यक्तिलाई ट्याक्सीको प्रयोग गर्न कंगाई एयरपोर्टबाट ओसाकाको शहरको केन्द्रसम्म जान महँगो छ। उदाहरणको लागि, कन्साइ एयरपोर्टबाट ओसाका स्टेशन एक मध्यम आकारको कारको लागि १ 15,000,००० येन हो। म तपाईंलाई ट्याक्सी लिन सिफारिस गर्न सक्दिन।
कन्साइ एयरपोर्टमा ट्याक्सी स्ट्याण्डहरू प्रत्येक टर्मिनलको पहिलो फ्लोरमा अवस्थित छन्। यदि तपाईं ओसाकाको शहर केन्द्रमा जानुहुन्छ भने तपाईं फ्ल्याट-रेट ट्याक्सी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
>> ट्याक्सीको लागि कन्साइ एयरपोर्ट, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
मैले जापानी सिम कार्ड र पॉकेट वाइफाइ भाडामा निम्न लेखहरू पनि लेखें। विवरणहरूको लागि, कृपया तलको लेख क्लिक गर्नुहोस्।
ओसाकामा पर्यटन सम्बन्धी जानकारीको बारेमा कृपया तलको लेख हेर्नुहोस्।